true marriage /zu-ZA/tools-for-life/marriage/steps/the-adventure-of-marriage.html read 2 7 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/marriage_zu_ZA.jpg Umshado
Noma nini lapho abantu behlangana ukuze basebenze njenge qembu, benza izivumelwano, noma ngabe zishiwoyo noma cha, maqondana nokuthi yikuphi okulungile ngokungalungile—ngamanye amagama, okuzosiza ukusinda kwe qembu nokuthi yini ezolimaza ekusindeni kwayo.
Lokhu kubizwa ngokuthi i-moral code—iqoqo lezivumelwano umuntu ngamunye anqume ukuzilandela ukuze aqinisekise ukuthi iqembu liyasinda.
Ubungako be qembu akunani—noma ngabe abantu ababili bakha umshado noma izwe lonke ubukhona liyakhiwa—amalungu e qembu angena ezivumelwaneni ezithile. Ukwephulwa kwesinye salezi zivumelwano ukwaziwa kakhulu ngokuthi ukwephula umthetho.
Lapho omunye umlingani ebudlelwaneni noma emshadweni ephula okuvunyelwene i-moral code, uvame ukuba nomuzwa wokuthi akakwazi ukutshela omunye umuntu ngakho. Kodwa lezi ziphambeko zingakhula kancane kancane zize zibangele ukwephuka kobudlelwano.
Ku-Scientology, igama elisetshenziselwe isenzo esiyingozi noma ukweqa i-moral code ye qembu i-overt act noma, okulula kakhulu, i-overt.
I-overt kungaba yinto oyenzile obekungafanele uyenze noma into uingayenzanga obekufanele uyenze, ngokuya nge-moral code.
Enye indlela yokuyibuka ukuthi i-overty yinto oyenze kwenye ongeke uthande ukuyenza kuwe.
Isibonelo, thatha indoda eyenza isivumelwano nonkosikazi wayo ukuthi izohlangana naye endaweni yokudlela ngalobo busuku ukuze bagubhe usuku lwabo lomshado. Kamuva ngalolo suku, umngani wakhe umcela ukuthi aye kumamuvi bese enquma ukuya khona esikhundleni salokho. Akaqhamuki ukuhlangana nonkosikazi wakhe, noma aze amshaye-le ucingo amazise, agcine esedla yedwa. Lokho kungaba i-overt act.
Lapho umuntu uzibophele (enza) i-overt ngokumelene nomuntu oyedwa, uvame ukuzizwa engeke amtshele lowo muntu ngakho ngokwesaba okungenzeka. Ngakho-ke, uyigcina kuye yena—ama-withholds.
I-withhold si-overt act esenziwe ukuthi umuntu uzibophezele ukuthi akakhulumi ngayo.
Noma yikuphi i-withhold ngemuva kwe-overt.
Ama-overts nama-withholds nokugodlwa kwehlukanisa umuntu ekuxhumaneni ngokukhululekile nensali ye qembu noma yomndeni wakhe.
Ukwenza isibonelo, uma umuntu eya ekhasino futhi ulahlekelwe yimali yonke ebiyibeke-le eceleni futhi idinga ukukhokha izikweletu zomndeni, yenze i-overt act. Uma-ke efihla leli qiniso futhi engakaze alikhulume ngalo kumkakhe noma emndenini wakhe, wephule isivumelwano iqembu elisuselwe kulo. Lolu uhlobo luwe senzo olubangela ukuhlakazeka (ukuhlukanisa kube izingxenye) zomndeni.
Umshado owephukile kuze kufike lapho abalingani behlukaniswe khona ngenxa ama-overts nama-withholds cishe akunakwenzeka ukubuyisa ndawonye ngo postulate khona. Ngemuva kokuthi abantu behlukanisiwe omunye nomunye, kufanele bangahlukani ngokwabo. Kufanele, ngandlela ekuthile, babuyelane ukuxhumana futhi babuye ukudala umshado wabo. Kepha bakwenza kanjani lokho?
Abanye abantu bangacabanga ukuthi umshado ufana nokunye abakufunde encwadini yezindaba noma abakubone kumovie. Bangase bacabange ukuthi ngosuku oluhle lwehlobo, bazohlangana umuntu oyindoda obubekayo noma le ntombazane enhle. Bese behlangana bese bethi, “Ngikwenza kuze kube yilapho ukufa kusihlukanisa.” Futhi bacabanga ukuthi benze umshado ngokusho lokho nje. Kodwa empeleni, abakaqali nokho okwamanje.
Ungacabanga ukuthi umshado kubo kuningi okumele ukwenze nobudlelwano. Akukwenzi. hlobene kakhulu nezinto ezifana nokwakheka naba-razor blade nezingubo kanye nemotlo nendlu okufanele yabiwe ndawonye. Kufanele bafunde ukuhlala munye nomunye—uma bekwazi.
Ngokwezinga elithile, basule out noma basusa—ngesenzo sokushada—lokho ababekwenza phambilini. Benza lesi sivumelwano futhi kufanele baqale lapho. Yilokho okwenzekayo ukusuka lapho kusuka lapho kuqhubeke out loko kubalulekile.
Kodwa kwesinye isikhathi izinto abazenzile phambilini, oabazigodlanayo (ngamandla amakhulu), abavumeli ngisho ukuthi umshado uqalwe futhi ngemuva kwamahora angamashumi amane nesishiyagalombili umshado wabo ubheke enhlekeleleni noma enhlekeleleni. Lokhu kungenxa yokuthi kunama-overts amaningi kakhulu withholds ku-ngaphambi komhla ka-baze bazana.
Kodwa nalowo umshado ungasindiswa.
Emshadweni osuqhubeke iminyaka embalwa, ukwedlula izinto ezingagadli nokwakhiwa kungakhiwa kuze kube yilapho abalingani “bekhula bodwa.” Abanye bangakubheka njengokujwayelekile (indlela izinto ebezikhona ngayo isikhathi eside) ukuthi kuthi lapho kuphela iminyaka emithathu, abayeni namakhosikazi bangathokozi ngokuba munye nomunye. Bona ukunambitha njengenjwayelo. Kodwa kubonakala sengathi abazi ngempela ukuthi kungani lokho kwenzeka.
Kwenzeka ngenxa ama-overt acts nama-withholds abalingani bomshado banabo phakathi komunye nomunye.
Uma lokhu kwenzeka ekupheleni kweminyaka emithathu, ucabanga ukuthi kuzoba kubi kangakanani ekupheleni kweminyaka eyishumi? Ngaleso sikhathi, abashadileyo abaningi abasanda kufunda ukubekezelelana noma bobabili pakhati ukubuyisana—isimo sokuzama ukugcina omunye nomunye ezolile noma ukunciphisa intukuthelo lomunye nomunye. Ngandlela thile bayezwana futhi kungcono babe nakho ngaleyo ndlela kunenye indlela. Bancamela ukushada kunokuthi bangabi. Bacabanga ukuthi bakwenza kulungile. Futhi abasacabangi kakhulu ngentombazana noma umfana ababejwayele ukucabanga ukuthi bekufanele bashade esikhundleni salokho. Umshado wabo uhamba ngandlela thile.
Kulo bobudlelwane, Scientology ingenza okwethusayo futhikwenza uhleza oluyisimangal: singawuqeda umshado!
Isehlukaniso nokwehlukana kwenzeka nje ngenxa yokuthi kunama-overts amaningi nama-withholds phakathi kwabalingani bomshado. Kulula kanjalo nje.
Lapho umlingani womshado ezizwa ecindezekile noma enengcindezi futhi efuna ukuhamba athi, “Kufanele ngihambe” noma “Akufanele ngihlale” noma “Kufanele ngenze enye into” noma “Kufanele sihlukane” noma “Ngizoba kungcono ukube besingakwazanga,” yonke leyo mibono ivela masinyane kusuka ku ama-overt acts nama-withholds komlingani onaleyo micabango.
Empeleni, isizathu esiyisisekelo sokuthi umuntu enze lokhu ukuthi uzama ukuvikela omunye umlingani unya bakhe (ukuziphatha okubi noma okuyingozi). Ngakho-ke uzitshela ukuthi, “Kulungile, kungcono ngihambe” noma “Kungcono sihlukane” noma “Kufanele sipholise (sihlukane isikhashana).” Futhi leyo ngokuvamile kuyindlela ehamba kancane kancane yokuchitheka komshado. Kodwa, singathatha lezi zinto futhi “uncool” zibayise.
Uma wake wazama ukusiza ukuhlanza umshado phakathi kwezithandani, uzothola ukuthi zinganquma ukuthi konke sekuphelile futhi asikho isizathu sokuqhubeka nakho ngoba umuntu ubengeke akwenze… Into esindisa usuku isikhathi ngasinye ukwenza umuntu ngamunye akhumbule okwenziwe ngumyeni noma unkosikazi. Uma laba bobabili abashadile begcina nje lowo umcabango engqondweni futhi bedalula wonke ama-overts wabo nama-withholds, noma imuphi umshado ungasindiswa.